fitaovana fanongotana volo
Famokarana sy fanaraha-maso kalitao
Fahalalana ny vokatra
Ny tsy fitovizan'ny hety Tissue sy ny Gunting Suturing
Fotoana fandefasana: 03-23-2021
Ny maha samy hafa ny hety tisy sy hety Suturing Ny tsy fitoviana eo amin'ny hety sy ny hety suturing toy izao: 1. ny hety hozatra dia ampiasaina hanapahana ny vatan'ny olombelona, ​​sy ny hety ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny momba ny fitaovana mikraoba?
Fotoana fandefasana: 03-19-2021
Ahoana ny momba ny fitaovana mikraoba? Ireo zavamaneno mikraoba dia manondro fitaovana tsara manokana mety amin'ny dokotera hanatanterahana tsipiriany misaraka, manasaraka ary manapotipotika sy manamboatra tavy eo ambanin'ny mikraoskaopy. Fitaovana mikraoba ampiasaina matetika no: 1. Ny mikraoba mikraoba no tena ...Hamaky bebe kokoa »
Fandraisana an-tànana ny enti-miasa OPHTHALMIC
Fotoana fandefasana: 03-16-2021
Fandraisana an-tànana ny enti-miasa OPHTHALMIC. Ny fitaovana ophthalmika rehetra dia mila fikirakirana manokana. Ny teboka scissor dia marefo tokoa; ny tendrony dia tsy tokony hokasihina Ny hety rehetra, mpihazona fanjaitra ary fehikibo tsara dia mila arovana ny tendron'izy ireo Ireo mpiaro dia tsy maintsy manarona ny antsy manontolo na ...Hamaky bebe kokoa »
Fiovana lehibe folo amin'ny indostrian'ny fitsaboana any Shina tamin'ny 2021!
Fotoana fandefasana: 03-13-2021
Fiovana lehibe folo amin'ny indostrian'ny fitsaboana any Shina tamin'ny 2021! 1. Miditra amin'ny vanim-potoana 2.0 ny fiantohana ara-pitsaboana. Ny kinova 1.0 an'ny fiantohana ara-pahasalamana no voalohany indrindra fiantohana ara-pitsaboana manerantany ao Shina tao anatin'ny 5 000 taona ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no atao hoe fandidiana plastika?
Fotoana fandefasana: 03-08-2021
Momba ny fandidiana plastika Ny fandidiana plastika dia fahaizana manokana amin'ny fandidiana izay manamboatra, manamboatra ary manova ny vatan'olombelona. Mizara sokajy roa izy io: fandidiana fanarenana sy fandidiana kosmetika. Ny fandidiana fanarenana dia misy ny fandidiana craniofacial, ny fandidiana amin'ny tanana, ny microsurgery ary ny fandoroana ...Hamaky bebe kokoa »
Momba ny fampahalalana fisoratana anarana momba ny fitaovana fitsaboana any Sina avy amin'ny CMDE
Fotoana fandefasana: 03-05-2021
Momba ny fampahalalana fisoratana anarana momba ny fitaovana fitsaboana any Shina Avy amin'ny fampahalalana momba ny vokatra CMDE an'ny Class III ao an-trano, ny fitaovana fitsaboana Class II sy ny Class III nohajaina tamin'ny fisoratana anarana tamin'ny taona 2020 Tamin'ny taona 2020, ny fitondram-panjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina dia nanaiky ny totalin'ny fitaovam-pitsaboana 1.572 (anisany .. .Hamaky bebe kokoa »
Ny tena fanasokajy ny hety fandidiana
Fotoana fandefasana: 03-02-2021
Ny tena fanasokajiana ny hety fandidiana Matetika ny hety amin'ny fandidiana dia azo heverina ho sokajy maro araka ny fomba fanasokajiana samihafa. Toy ny fampiasa amin'ny faritra amin'ny vatana, dia misy ny mikraoba mikraoba, hety ophthalmic, hety sela, hety suturing, sns. Ao amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Hevitra sy fanantenana amin'ny anaran'ny fitaovana fitsaboana
Fotoana fandefasana: 02-26-2021
Matetika ny fitaovam-pitsaboana dia misy fitaovana sy fitaovana fandidiana, toy ny hety, fehikibo, mpihazona fanjaitra, farango, sns. Any Chine, ny fitaovana fandidiana dia voatanisa ho fitaovana fitsaboana Class I foana. Ny asa mifandraika amin'ny fanomezana anarana ny anaran'ny vokatra fitaovana fitsaboana dia manana tantara efa ela. Hatramin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Hongyu Medical nanatrika Konferansa mpandidy orthopedic natao tany Hangzhou City
Fotoana famoahana: 10-26-2020
Hongyu Medical nanatrika Konferansa mpandidy orthopedic natao tany Hangzhou City 2020-10-26 Ny valan-dresaka fandidiana plastika manan-danja sy malaza dia natao tao Xihu, Hangzhou, Sina, ny 20 ~ 24th, 2020. Nanatrika ny fivoriana ny filoham-pirenena HongMedical Mr.Chen sy ny mpitantana satria solontenan'ny pabu ...Hamaky bebe kokoa »
Coronavirus: Inona izany ary ahoana no hiarovako tena?
Fotoana fandefasana: 08-21-2020
Coronavirus: Inona izany ary ahoana no hiarovako tena? Virosy vaovao antsoina hoe coronavirus mahery taovam-pisefoana mahery vaika (SARS-CoV-2) no fantatra fa nahatonga ny aretim-pivalanana natomboka tany Chine tamin'ny taona 2019. Nantsoina hoe coronavirus disease 2019 (COVID-19) io aretina io. Tamin'ny martsa 2020, ny Wo ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fanavaozana ny fahasalamana dia hetsika sahisahy
Fotoana fandefasana: 12-19-2019
Ny politika any amin'ny faritra lehibe amin'ny fahasalamana dia mbola mavesatra sy mavesatra amin'ity taona ity. .Hamaky bebe kokoa »
Fampirantiana fahasalamana ho avy hongyu ho avy
Fampirantiana fahasalamana ho avy hongyu amin'ny ho avy, hijerena ireo fironana ara-pitsaboana dimy ho avy amin'ny 13 Janoary, ny fampirantiana CHTF faha-21 CHTF marani-tsaina fampirantiana, nosokafana tao amin'ny efitrano faha-2 ao amin'ny foibe fampirantiana. Varavarankely tsara io mba hahalalana ny fahasalaman'i Shina indostria ...Hamaky bebe kokoa »
Raha te hanontany momba ny fanavaozana anay izahay dia apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
ADD: 46 Dukangqiao Road, Chengdong, Huai 'An District, Huai' An City, Jiangsu Province, Sina